कसकी प्रेमिका राम्री ? - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
कसकी प्रेमिका राम्री ?
विश्वकपका बेला मैदानमा खेलाडीको जति चर्चा हुन्छ त्यति नै चर्चा मैदानबाहिर खेलाडीका प्रेमिका वा श्रीमतीहरुको पनि हुन्छ । विश्वकप खेल्ने अधिकांश खेलाडीले आफ्नी श्रीमती वा प्रेमिकालाई रसिया लगे यसपटक अर्को प्रतिस्पर्धा पनि हुनेछ– ‘कसकी प्रेमिका बढी राम्री’ भन्ने । यो विश्वकपमा चर्चामा आउन सक्ने प्रबल सम्भावना भएका खेलाडीका प्रेमिका तथा श्रीमतीहरू :
रसियन टिमको डिफेन्ड लाइन सम्हाल्ने फियोडोर कुर्दयाशोभाकी श्रीमतीलाई रसियाका खेलाडीका प्रेमिका तथा श्रीमतीहरूमध्ये रानीको उपनाम दिइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा मोडल एनेस्थेसिया कुर्दयासोभाका लाखौं फलोअर्स छन् । जाडोमा माइनस ४० डिग्री तापक्रम रहने काजानमा बसोवास गर्ने एनेस्थेसियाको बोल्डनेसले धेरै युवाहरूलाई तताउँछ ।
पोल्यान्डका स्ट्राइकर एवं कप्तान रोबर्ट लेवानडोस्कीकी २९ वर्षीया श्रीमती एन्ना लेवानडोस्का यो विश्वकपमा हेर्नुपर्ने अर्की श्रीमती हुन् । कराँतेकी पूर्वखेलाडी एन्नाले ३० वटा स्वर्ण पदक जितेकी छिन् । खेलकुदबाट संन्यास लिएपछि उनले न्युट्रिसनको अध्ययन गरिन् । अहिले उनी आफ्नै एउटा हेल्थ ब्लग सञ्चालन गर्छिन् । ब्लगमा रहेका कन्टेनलाई उनी १७ लाख फलोअर्स रहेको आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टमार्फत सेयर गर्छिन् । त्यसबाहेक उनको आफ्नै हेल्थ फुड कम्पनी पनि छ ।
म्यानचेष्टर युनाइटेडका गोलकिपर डेभिड डि गियालाई अहिले विश्वकै उत्कृष्ट गोलकिपरका रूपमा लिइन्छ । स्पेनिस टिमवाट विश्वकप खेल्ने डेभिडकी श्रीमती ३२ वर्षीया इडुर्नी गार्सियाप्रति दर्शक मात्र नभएर अन्य खेलाडीका प्रेमिका पनि आकर्षित हुनेछन् । म्याड्रिडमा जन्मिएकी पप गायिका इडुर्नी स्पेन गट ट्यालेन्टको निर्णायक भएपछि उनको लोकप्रियता थप बढेको थियो ।
ब्रुना माक्र्विजिन चोटबाट हालै मैदानमा फर्किएका ब्राजिलका स्ट्राइकर नेयमारकी प्रेमिकाले धेरैको ध्यान खिच्ने अनुमान गरिएको छ । २२ वर्षीया ब्रुना माक्र्विजिन ब्राजिलकै अभिनेत्री हुन् । ६ वर्षअघि रियो कार्निभलमा भेट भएपछि उनीहरूको मित्रता प्रेममा परिणत भएको थियो । सानै उमेरदेखि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सक्रिय ब्रुनाको इन्स्टाग्राममा २ करोड ८० लाख फलोअर्स छन् । नेयमारको आम्दानी र ब्रुनाका फलोअर्सको मिलनले यो विश्वकपमा उनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्‍याउने पक्का छ ।
रुबी माई विश्वकपमा इंग्लिस फुटबलरका प्रेमिकाको चर्चा भएन भने त्यो खल्लो हुन्छ । इंग्ल्यान्डका तर्फबाट चर्चामा आउने प्रेमिकामा रुबी माई सबैभन्दा अगाडि छिन् । टोटेनह्यामका मिडफिल्डर डिली अलिकी २३ वर्षीया प्रेमिका रुबी माई मोडल हुन् भने उनी सामाजिक सञ्जालमा राम्रो प्रभाव पार्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छिन् । उनी आफ्ना ६० हजार इन्स्टाग्राम फलोअर्सलाई विभिन्न कम्पनीका पहिरनले आकर्षित गर्छिन् । त्यसबाहेक उनी च्यानल, डाल्सि एन्ड गाबाना आदि कम्पनीका प्रोडक्टहरूको विज्ञापन पनि गर्छिन् भने आफ्ना प्रेमीसँग छुट्टी मनाइरहेका तस्बिर नियमित रूपमा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्छिन् ।